စောချစ်သူ: Web စာမျက်နှာများအား PDF အဖြစ်ဖန်တီးခြင်း
အရင်ကတော့ ဒီလိုမေးခွန်းမျိုး မိသားစုဝင်တွေ မေးခဲ့ဖူးကြတယ် - အဲ့တုန်းကတော့ အလွယ်ပဲ ဖြေဖြစ်လိုက်တယ် - Web စာမျက်နှာကို PDF ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် PDF creator တစ်ခု ( ဥပမာ - PrimoPDF ( ဒါမှမဟုတ် ) doPDF ) တင်ပြီး ကို PDF ထုတ်ချင်တဲ့ Web စာမျက်နှာကိုဖွင့် - နောက်ပြီး Ctrl+P ကနေ တစ်ဆင့်သွားပြီး ထုတ်ဆိုတဲ့ အကြံပြုချက်နဲ့ အလွယ်ပြောခဲ့ဖူးတယ် -
တကယ်တော့ အဲ့နည်းက Web စာမျက်နှာကို PDF ပုံစံမျိုး ပြောင်းပေးသွားတာမှန်ပေမယ့် ကိုပုထုဇဉ်ပြောထားသလိုမျိုး PDF သန့်သန့်လေး မရဘူး - သူ့ ၀က်ဘ်စာမျက်နှာပေါ်က ဘောင်ချထားပြီးသား အသွင်အပြင်နဲ့ ထွက်လာတတ်တာမျိုး - အဲ့လို မဖြစ်ရအောင်လုပ်ဖို့က နည်းလမ်းတွေ တော်တော်များများ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ - ကျွန်တော်တို့ သမားရိုးကျနည်းနဲ့ သွားမယ်ဆိုရင် Microsoft Word ကိုဖွင့်ပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Web စာမျက်နှာပေါ်က ပို့စ်ကို တစ်ခုချင်းစီ Copy ကူးပြီး Save တာ - နောက်တော့မှ အဲ့တာကို PDF ပြန်လုပ်ပေါ့ - အဲ့နည်းကတော့ အခြေခံနည်းပဲ - လူတိုင်းနီးပါး ဒီနည်းကို သိတယ် - တစ်ခုရှိတာက အဲ့လို Web စာမျက်နှာပေါ်က ပို့စ်တွေကို Copy ကူးပြီး Word ထဲထည့်တဲ့ အခါမှာ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာပေါ်က ဘောင်ချထားပြီးသား အသွင်အပြင်နဲ့ ဝင်သွားတတ်တယ် - အဲ့လို မဖြစ်အောင်ဆိုရင် ဝက်ဘ်စာမျက်နှာပေါ်က စာသားတွေကို Copy ကူးပြီး Word ထဲကို Paste လုပ်ပြီးတာနဲ့ Word 2010 မှာ ဆိုရင် အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း Home > Paste > Keep Text Only ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။
ဒါဆို ဝက်ဘ်စာမျက်နှာပေါ်က ဘောင်ချထားပြီးသား အသွင်အပြင်နဲ့ မဟုတ်တော့ပဲ ပုံမှန်အတိုင်းလေး ရလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါက တစ်နည်းပါ။ နောက်ထပ်တစ်နည်းရှိသေးတာက အရင်တစ်ခါတုန်းက အင်တာနက်နှင့် ကျန်းမာရေး ဆိုပြီး ကျွန်တော် တစ်ခါရေးခဲ့ဖူးတယ် - တစ်ချို့လည်း ဖတ်ဖြစ်ကြတဲ့သူ ရှိသလို တစ်ချို့လည်း မဖတ်ဖြစ်လိုက်ကြဘူး - အဲ့ဒီ့မှာ ရေးခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာဟာ အခုရေးမယ့် အကြောင်းအရာနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ ဒီ Thread မှာ ရေးပေးမယ့် Web စာမျက်နှာတွေကို PDF အဖြစ်အလွယ်တကူ ဖန်တီးနိုင်အောင် အဲ့မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ Browser Extension တွေ - Bookmarklet တွေကိုပဲ သုံးသွားမှာ မို့လို့ပါ။
နည်းလမ်း ( ၁ ) - Bookmarklet ဖြင့် စာမျက်နှာအား Format ချ၍ PDF ပြုလုပ်ခြင်း
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 480x212.
အရင်ဆုံး Bookmarklet နဲ့ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတွေကို Format ချပြီး PDF လုပ်ဆောင်ဖို့ အရင်ဆုံး ဒီနေရာကို သွားလိုက်ပါ။ အဲ့ဒီ့ Application ကို ကျွန်တော်တို့ Readable လို့ ခေါ်တယ်။ အဲ့စာမျက်နှာကို ရောက်ရင် ညာဘက်အောက်ထောင့်က Show Setup ကို နှိပ်ပါ။ နောက်စာမျက်နှာ ပေါ်လာလိမ့်မယ် - အဲ့မှာ Choose Style ကနေ တစ်ဆင့် ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ ပုံစံ ရွေးလို့ ရတယ်။ ကျွန်တော်စံထားတဲ့ ပုံစံကတော့ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်းပါ။
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 481x183.
Choose Style မှာ တစ်ခုခု အပြောင်းအလဲ လုပ်တိုင်း Preview မှာပါ လိုက်ပြောင်းတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် အနေအထားကို ကိုယ့်ဘာသာ ချိန်ညှိပါ -
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 464x155.
ဒါကို ဘာလို့ လုပ်နေရလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာကို Bookmarklet သုံးပြီး Format ချတဲ့ နေရာမှာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ပုံစံ ပေါ်စေချင်လို့ပါ - ဒါမှလည်း PDF လုပ်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် Format ချထားတဲ့ ပုံအတိုင်း ထွက်မှာပေါ့။ စိတ်ကြိုက် အနေအထားရရင် Bookmarklet ကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း Bookmarks bar ပေါ် Drag ဆွဲတင်ပါ။
ဒီနေရာမှာ တစ်ခု ရှိတာက ဘယ်သူတွေ ဘယ် Browser သုံးကြတယ် ကျွန်တော်လည်း မသိဘူး - ကျွန်တော်ကတော့ Google Chrome သုံးတယ် - ဘယ်ဟာပဲ သုံးသုံး Browser တော်တော်များများမှာ Bookmarks bar ဆိုတာ ပါတတ်ပါတယ်။ Google Chrome မှာဆို Ctrl+Shift+B နှိပ်ရင် Bookmarks bar ပေါ်လာမယ်။ Firefox မှာ ဆိုရင် အောက်မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း Right Click ထောက်ပြီး ခေါ်လို့ ရတယ်။
Internet Explorer9သုံးတဲ့သူဆိုရင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း Favourite bar ဆိုတာ ရှိတယ် - သူလည်း Right click ထောက်ပြီး ခေါ်လို့ရတယ်။ အားလုံးက သဘောတရားချင်း တူတူပါပဲ - Bookmarklet ကို Drag ဆွဲတင်လို့ ရပါတယ်။
ပြီးရင် ကိုယ် Print ထုတ်ချင်တဲ့ စာမျက်နှာကို သွားပါ။ ဥပမာ - အင်တာနက်နှင့် ကျန်းမာရေး ဆိုတဲ့ စာမျက်နှာကို PDF လုပ်ထားချင်တယ် ဆိုကြပါစို့ - ဒီလိုဆို အဲ့စာမျက်နှာကို သွားပြီး ရောက်ရင် ခုနက Bookmarks bar ပေါ်ဆွဲတင်ထားတဲ့ Bookmarklet ကို Click ပေးပါ။ အဲ့လို Bookmarklet ကို Click ပေးလိုက်တာနဲ့ အရင်တွေ့နေရတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေ အားလုံး ပျောက်ပြီး ကိုယ်အဓိက လိုချင်တဲ့ စာသားတွေချည်းပဲ ကြွတက်လာပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ စာလုံးတွေ ဘာတွေကြီးနေတယ် ထင်ရင် အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အဆင့်တွေအတိုင်း ပြန်သွား ပြန်ပြင် Bookmarklet ကို ပြန်ဆွဲတင်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ကျော့လို့ ရပါတယ်။
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 475x216.
ဟုတ်ပြီ - ဒီအနေအထားကို ကြိုက်ပြီ ဆိုရင် Bookmarklet နဲ့ Format ချထားတဲ့ အသွင်အပြင်အတိုင်း မြင်နေရတဲ့ Web စာမျက်နှာရဲ့ အောက်ဆုံးနားကို သွားပါ - အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း Print ဆိုတာကို မြင်ရလိမ့်မယ်။
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 455x192.
အဲ့နေရာကို ခဏမှတ်ထားပြီး doPDF ကို တင်ပါ။ တင်ပြီးသွားရင် အဲ့ဒီ့ Print ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ခုလိုမျိုး Box တစ်ခု တက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း Printer ကို doPDF ရွေးပါ - Print ကိုနှိပ်ပါ -
နောက် box တစ်ခု တက်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း - ကိုယ့် PDF ဖိုင်ကို Save ချင်တဲ့ နေရာရွေး High quality images ကို Select လုပ်ပြီး OK ပေးလိုက်ပါ -
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 557x244.
ဒါဆို ကိုယ် PDF အဖြစ်သိမ်းထားချင်တဲ့ စာမျက်နှာကို တစ်ခြား မလိုအပ်တဲ့ ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက် အပြင်အဆင်တွေ မပါလာပဲ စာသားနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ရုပ်ပုံ သီးသန့် သိမ်းဆည်းပြီးသား ဖြစ်ပါပြီ။
ခုဖော်ပြတာ နည်းလမ်း ( ၁ ) ပါ - နောက်ထပ်နည်းလမ်းတွေ ဆက်ပြီး ဖော်ပြပေးပါဦးမယ်။
Source : KznT.
Posted by minchitthu at 03:10
Labels: PDF ဖိုင်